XOG: Yaa ka dambeeyay Taliyaha been abuurka ah ee NISA ee loo magacaabay Jubbaland? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XOG: Yaa ka dambeeyay Taliyaha been abuurka ah ee NISA ee loo magacaabay Jubbaland?
Tuuryare 21 August 2018
Inkastoo uu socdo baaritaan adag, haddana sida ilo wareedyo ay xaqiijiyeen waxaa warqada been abuurka ah u sameeyay Cali Mire Ducaale, ku simaha agaasimaha NISA Cabdullaahi Adan Kullane.
Warqada been abuurka ah ayaa waxaa Cali Mire Ducaale loogu magacaabay Talyaha NISA ee Jubbaland, taas oo ay diideen maamulka Jubbaland.
Markii dowladda federaalka Soomaaliya dib u baartay magacaabistan ayaa waxaa soo baxday warqada uu watay Cali Mire Ducaale inay tahay mid been abuur ah, hogaanka sare ee NISA iyo dowladda Soomaaliyana ay waxba ka ogeyn, iyadoo taasi ay sababtay in xalay ciidamada ammaanka NISA ay xabsiga u taxaabaan ninka sheeganayay in loo magacaabay Taliyaha NISA ee Jubbaland Cali Mire Ducaale.
Ku simaha agaasimaha NISA Cabdullaahi Adan Kullane ayaa doonayay inuu iska horkeeno Dowladda Federaalka iyo Maamulka jubbaland markuu ogaaday in warqadaha been abuurka ah ee uu sameeyay Cali Mire Ducaale in uu ku fashilmay, waxa uu shalay subax arroortii ka duulay magaalada Muqdisho isaga oo u baxsaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waayo Ku simaha agaasimaha NISA Cabdullaahi Adan Kullane waxa uu horey uga tirsanaa maleeshiyaadkii Kornayl Bare Aden Shire (Bare Hiiraale), waana mayal adag, islamarkaana si aan wanaagsaneyn ula dhaqma dadka ay kala dhaxeyso wada shaqeynta.
Inta uu joogay Hay’adda NISA waxa uu gabi ahaan qalqal iyo ku tagri fal awoodeed ku hayay dhawaanahan Hawlwadeenada Xarunta ciidamada NISA, waxaa uu shaqada ka eryay ama ka fadhiisayay saraakiil tayo iyo aqoon u leh hawlahooda shaqo, waxa uu sidoo kale ku tagri falay hantida ciidamada NISA, sida ay sheeegeen ila wayeedyo.
Ku simaha agaasimaha NISA Cabdullaahi Adan Kullane ayaa waxa uu mudo kooban kasoo shaqeeyay xafiiska Madaxweyne Farmaajo, halkaas oo laga soo eryay kadib markii uu qof walba oo ka shaqeenayay xafiiska Madaxweynaha la dagaalamay ama si xun ulla dhaqmay.
Cabdullaahi Adan Kullane iyo rag kaloo ku xiran ayaa ah kuwo dhexda u xirtay sida ay u fashilin lahaayeen qorsheyaasha dowladda Nabad iyo Nolol ee uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale Cabdullaahi Adan Kullane waxa uu gudaha magaalada Muqdisho iyo goobaha bulshada isugu yimaadaan si joogto ah ugu hayaa aflagaado iyo hanjabaad uu u geysanayo gabi ahaan dadka, isagoo wata ciidamo ilaalo u ah, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo.
Waxaa nasiib daro ah in shaqsi leh dhaqanka noocaas ah, lahayna aqoon hogaan sirdoon, islamarkaana ku amar taagleeya shaqaalaha in dowladda Soomaaliya ay xil uga dhiibto dalkan.
Ciid Mubaarak Dhamaan Akhristayaasha Shabakada Mareeg.com
African Union sends Eid wishes to Somalis